Nubhia - Wikipedia
Vatongi veNubhia mumyuziyamu ye Kerma
Nubhia kan Nubhiya (Chinobhiini: Nobin; Chiarabhu: النُوبَة, an-Nūba) inzvimbo ye muAfurika iri kumaodzanyemba kuruwa riri kudhuze neRwizi rwe Nairi muIjipita (kumaodzanyemba kwe Aswani) ne Sudhani ( kuchamhembe kwe Kharitoumi). Yaimbozivikanwa seKushi uye kunyange Itopiya.
Munhoroondo yose yave iri nzvimbo yehumambo hwakasiyana-siyana, uye humambo hwe Kushaiti ne Meroe hwakanga huri hukurusa hwahwo.
Kubva kare maManubhiya vaive vavakidzani veIjipita Yekare kumaodzanyemba. Paiva nenguva apo Ijipita yaitonga nzvimbo huru dzeNubhia, pamwe chete nenguva apo Ijipita yekare yaikwikwidzana nevavakidzani vayo nokuda kwehondo .
Kubva pamadziro ekupenda mumakuva eIjipita zvinoita sekuti maNubhia vaive vatema vemuAfurika. Hondo yekare ye Ijipita\_\_ yaive nemauto eNubhia aigara. Kubva pamifananidzo iyi zvinoita sekunge kune akati wandei Mafharao eIjipitia (madzimambo).
Muna 700 BC maNubhia akapinda nechisimba ndokukunda Ijipita uye madzimambo avo akatonga humambo hwe Ijipita sedzinza rechimakumi maviri neshanu kusvika vadzingwa muIjipita nechisimba cheAsiriya.
Kubva 600 BC Nubhia yakawana epicenter yayo yekumaodzanyemba muMeroe landscape.
Marhoma ekare akatonga Ijipita mushure meJulius Caesar vakarwawo kakawanda ne Manubhia.
Bhaibheri rinotaura nezvomukuru mukuru wokuItiopiya somushumiri wa “Mambokadzi we Itopiya” uyo akashanyira Jerusarema ndokuva muKristu man'wadhi raMabasa ganhuro 8.
Zvinozivikanwa kuti kubva muzana ramakore rechitanhatu AD Nubhia yaive nyika ye Chikristu. Humambo hwechiKristu hwakaenderera mberi nehondo uye Maarabhu akapinda nechisimba ndokukunda Ijipita muzana ramakore rechinomwe.
Zvishoma nezvishoma Iziramu yakatanga kupararira pamwe chete nevapambi vechiArabhu uye humambo hwekupedzisira hwe Chikristu muNubhia hwakatorwa ne Vaiziramu muna 1504.
Zvishoma nezvishoma vazhinji vevaNubhia vakasiya mutauro wavo uye vakashandisa Chiarabhu asi kune nzvimbo dzinotaurwa Chinubhia chanhasi.
Vakarambawo vachisiya Chikristu uye vachitendeukira kuIziramu (maitiro akapera muzanagore rechi19).
Parizvino kune hondo huru mudunhu reNubhia pakati pe Maarabhu nevagari venzvimbo iyi. Maarabhu anoda kunyima Manubhia mugove wavo. Chii chave chiri chikonzero chehondo kwemakore nemakore sezvo Manubhia akarwira nharaunda yavo.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nubhia&oldid=94261"
Nhoroondo ye Afurika
Nhoroondo ye Ijipita
Nhoroondo ye Sudhani
Nhoroondo ye Nubhia
This page was last edited on 4 Chivabvu 2022, at 04:23.